Avy amin'ny afrikana reflexology - AFRIKHEPRI
Afrikana ny reflexology
Fametrahana famafana sy tongotra
DNamboarina tamin'ny fomba fanao tamin'ny razana momba ny fikojakojana ny fahasalamana sy ny fahasalamana, ny reflexology dia niseho indray tamin'ny taonjato faha-20. Izy io dia tafiditra amin'ny fampiasana ny zava-misy fa ny famporisihana rehetra dia araky ny valin'ny organika. Amin'ny alàlan'ny fanerena amin'ny zona sasany na reflex point ny tarehy, ny vatana manontolo, ny tongotra, dia esorintsika ny fanakanana angovo, fanamaivanana ny fanaintainana ary hampiroborobo ny fandanjalanjana angovo tsara ao amin'ny vatana iray manontolo. Amin'ny alàlan'ny fandanjalanjana ny angovo mandeha ao amin'ny YIN sy YANG izay mahavelona ny olombelona dia afaka miasa tsara ny taova.
Ny reflexology dia fifehezana ara-pitsaboana tsy manam-pinoana, karazana fanasitranana. Mety misy planar, endrika, orikara, palmar na integral.
Ny Incas, izay sivilizasiona taloha taloha tany Peroa, izay efa 14 taona mahery, no voalaza fa nampita an'io karazana fitsaboana io tamin'ny Indiana Indianina Avaratra, izay mbola manao izany ankehitriny. Ny fivontosana tongotra dia heverina ho zava-kanto masina.
Naseho fa ny foko sasany tany Afrika koa dia manana traikefa lavitra amin'ity faritra ity. Tany India, ny takelaka vita sokitra taloha dia hita fa maneho ny mifanitsy eo anelanelan'ny faladian'ny tongotra sy ireo taova anatiny.
Ny reflexology dia efa nisy 4 500 taona lasa izay tany Ejipta raha ny porofon'ny sary sokitra hita tany Saqqara tamin'ny fandevenana dokotera ejipsiana. Ny fahitan'ny fresco vaventy nanomboka tamin'ny 2500 ka hatramin'ny 2330 al.fi dia misolo tena olona efatra, anisan'izany ny mpitsabo roa izay manome masera ho an'ny olona roa hafa. Ny tanan'ny marary iray dia nanondro ny mpitsabo ilay faritra mampanaintaina faobe. Ireo famantarana eo ambony lampihazo dia efa voafaritra ao amin'ny Museum Museum any London. "Azafady, aza atao maharary ahy", hoy ilay marary. "Hiezaka mafy aho mba hanampy anao", hoy ilay mpitsabo. Ity tarehin-javatra ity dia misolo tena ny fampiharana ny reflexology.
Reflexology integral dia natao tany Tibet sy tany amin'ny faritra sasany any Atsinanana, arivo taona lasa izay. Tany Chine dia dokotera Wang-Wei, dokotera tamin'ny taonjato faha-4 talohan'i Kristy no niasa acupuncture sy reflexotherapy. Tany Andrefana, iray amin'ireo sanganasa voalohany momba an'io lohahevitra io dia navoaka tamin'ny 1582 tamin'ny dokotera roa eropeana, malaza tamin'ny androny, ny dokotera Adamus sy Atatis.
Ahoana ny fomba fiasan'ny reflexology?
Reflexology amin'ny sofina dia reflexology. Izy io dia teknika iray izay ampiasaina amin'ny fampiasana ny pinna an-tsofina ho an'ny tanjona fitsaboana amin'ny alàlan'ny zavatra manaitaitra na zona reflex.
Ny reflexology amin'ny atrial dia manakana feo reflex, izany hoe ny famporisihana ny teboka iray dia miasa, amin'ny feo reflex, amin'ny alàlan'ny rafi-pitatitra, ao amin'ny taova mifanentana. Tokony ho fantatrao fa ny teboka auriculo-reflexology dia tsy hita raha sendra mijaly ireo taova mifanandrify.
Amin'ny alàlan'ny topografika an-tsofina, dia mikaroka ireo faritra maharary ny naturopath mba hampirisihana azy ireo (fitaovana ampiasaina: stylus metaly).
Atrial reflexology manolotra manokana protocols hiady fanaintainana (rheumatic olana, Matsilo milaza zavatra hetsika), fiankinan-doha (ny fifohana sigara, kafe ...) sy ny adin-tsaina (natahotra sy ny aretin-tsaina).
Ny niandohan'ny reflexology atrial
Ny fiandohan'ity teknika ity dia efa antitra. Toa efa zatra fanazarana tany amin'ny fahanterana, indrindra any India, China ary Egypt; fomba fanasitranana mahazatra io tany amin'ny faritry ny faritany Mediterane tamin'ny taonjato efatra talohan'i JK. Nampitony ny alahelo ny Ejipsianina tamin'ny famporisihana ireo teboka manokana hita teo amin'ny sofina. Fantatry ny sinoa koa io fomba io. Hippocrates nahomby tamin'ny fitsaboana sasany amin'ny aretim-bavany amin'ny fandatsahan-dra kely ao amin'ny faritra sofina.
Araka ny teoria ara-pitsaboana sinoa, ny sofina tsirairay dia manana teboka mihoatra ny 120 acupuncture izay mifandray amin'ny faritra maro ao amin'ny vatana. Ny diagnostika amin'ny auriculopuncture dia miorina amin'ny fifandanjan'ny angovo ary koa amin'ny toe-piainana eo an-toerana amin'ny fikomiana dia mikendry ny hanainga ireo teboka 120.
Origine of refluxologie nasal
Raha ny tandindon'ny orona ho an'ny Tibetana dia fanehoana ny toetrany sy ny fomba fanehoan-kevitr'izy ireo, dia nanana lanjany lehibe tany Ejipta fahiny izy. Efa ela talohan'ny Cleopatra Julius Caesar dia nilaza fa misy orona mahaliana, dia naverina izany, tao anatin'ny fotoana lava be Ho fanomezam-boninahitra ny akanjon'ny olona iray raha te hitazona ny fahasalaman'ny olona iray ".
Ny fiavonavonan'ny reflexology endonasal dia tena lavitra. Teraka tany Chine sy Ejipta izy. Hippocrates (taonjato faha-5 talohan'i JK) dia nampiasa azy io mba hanoherana ireo fanafihana niverimberina ary namaha ny olana sasany toy ny fitsaboana diaphragmatika.
Tsy tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 no nahitana io fanao io tamin'ny fampiroboroboana ny siansa.
Pierre Bonnier (1861-1918) dia mamoaka lahatsoratra maromaro momba io lohahevitra io.
Tamin'ny taona 30, Paul Gillet dia namoaka ny traikefa momba ny fitsaboana mampihetsi-po. Ity fomba ity dia mahazo ny firoboroboana eto Espaina sy Alemana.
Ao anatin'ny taona 80, Bonneton, Bontemps, Ricard, dia mamoaka asa mahaliana maro.
Vetivety dia misy, boky famintinana mampanantena nosoratan'i Daniel Bobin: “Ny fitafy fitondra-tena tsara".
Fitsipika momba ny elo
Ao amin'ny isan-karazany ny endriky fitsaboana, izay tafika amin'izao fotoana izao ny lamaody obliges sympathicotherapy mitana toerana fanta-daza Toy izany koa toy ny tsindrona volamena taorian'ny fanafody nentim-paharazana sinoa, ny Auriculotherapy, isan-karazany reflexology podal, ny osteopathy, sns.
Ny fitsipika momba ny reflexotherapy dia ny mamorona bikam-pitaratra iray, izay, amin'ny toerana rehetra amin'ny vatany, dia hiantehitra amin'ny toerana iray hafa, na dia ny taova, ary na dia ny asany aza, mandamina, manaparitaka na manangona.
Ao anatin'ity fomba fijery ity no nahatonga ny somatotopies noforonina, sarintany marina momba ireo sombin-tany na faritra misy hetsika amin'ny faritra samihafa amin'ny taova. Noho izany, misy atriary, plantar, ocular, nasal, abdominal, meridians dia somatotopies, maro be aho.
La nasal reflexology ou sympathicotherapy dia teknika iray mampiasa teboka reflex, tamin'ity indray mitoraka ity eo amin'ny membrane mousse de fossae nasal, izay nilahatra niaraka tamin'ny fiafaran-dra maro nateraky ny rafi-pankasitrahana, nampitohy azy ireo taova samy hafa. Amin'ny sympathicotherapy, ny famporisihana dia atao amin'ny alàlan'ny fihetsika 3 isaky ny orona amin'ny alalan'ny stylets, matevina na semi-matevina, misy toro-hevitra boribory ary matetika amin'ny ankapobeny, mampiasa baoty vita amin'ny impregnated amin'ny menaka ilaina.
Ny fitsaboana mampihetsi-po dia miasa ao amin'ny sampana fahatelo ao amin'ny tendrony trigeminal amin'ny fanodikodinana ny rafitra neuro-vegetative (orthosympathetic sy parasympathetic) amin'ny voka-dratsin'ny rivotra. Ny fanentanana ny teboka sasantsasany na ny faritra amin'ny orona dia ahafahana manasitrana ny lozam-pifamoivoizana samihafa. Ny fampiasana ny menaka tena ilaina dia manamafy ny fomba fiasa amin'ny fomba sasany.
Ny valiny dia mahagaga satria manome lalana tsotra sy ambonin'izay haingana haingana izay mikendry ny hanentana ireo teboka sasany amin'ny zona reflexogenic endonasal, mba handanjalanja sy hanara-maso ny fihetseham-po sy ny parasympatetika noho izany ny rafi-pitondrana.
Azo atao ny manao fanazaran-tena noho ny tongotra tongotra, ny fanenon-tànana dia misy tombony satria tsotra dia vita: natao haingana sy amin'ny toe-javatra rehetra.
Ny famporisihana ireo teboka angovo dia atao amin'ny alàlan'ny tsindry, micro-massages ary boribory micro-masera. Ny reflexology Palmar dia mety hitovitovy amin'ny fanamafisana ny tanana, saingy mijanona ho samy hafa be fotsiny amin'ny fametrahana faritra saro-pady.
Sahala amin'ny tongotra, ny fitaratra dia fitaratra amin'ny vatantsika. Ny zon reflexogen dia hita eo amin'ny felana, eo amin'ny rantsantanana ary eo an-tampon'ny tanana roa. Antsoina foana, ny tanana matetika tsy mora tohina noho ny tongotra amin'ny asan'ny reflexologist, nefa na izany aza avelao ny mahaliana asa, mifameno amin'ny fanatontosana ny reflexology zavamaniry, ny hetsika izay manatanjaka azy.
Ny reflexology palmie dia rahavavin'i Plantar Reflexology. Tahaka ny tongotra, ny tanana dia mifamatotra amin'ny taovantsika manontolo. Ny fahatsorana azy dia «eo amin'ny fanondronao». Ny reflexology Palmar dia azo ampiharina amin'ny fotoana rehetra, toy ny fanamaivanana ny aretin'andoha.
Na dia misy takela-pandrefesana mifantoka amin'ny rafitra neurovegetative (tsy mahatsiaro tena aza ny tongotra) dia mifantoka amin'ny kortex ny tanana ary noho izany amin'ny saina.
Ny felatanan'ny tanana dia manana fahatapahan-doha mahatsiravina an'arivony, izay mametraka azy ireo amin'ireo faritra tena saropady amin'ny vatana. Azo ampiasaina ny manaitaitra na manaitaitra ny vatana manontolo. Ny fametahana tànana dia manalefaka ny havizanana mandritra ny andro maharitra. Izy io dia afaka mamelombelona, ​​mamelombelona ary milamina. Izy io dia mora azo, mora vidy ary tsy handany fotoana be mba hanaporofoana mahomby: 10 ka hatramin'ny 15 minitra fiterahana dia ampy hametrahana torimaso tsara sy fialan-tsasatra tsara amin'ny alina, ary ho an'ny maro dia tsy misy ny fatiantoka tsy maintsy mamongotra.
Manala ny fihenjanana, manamaivana ny adin-tsaina, mamerina ny angovo sy ny tononkalo, manitsy indray ny asany lehibe amin'ny vatany.
Noho ny fitsaboana nikendry ny faritra rehetra amin'ny endriky iombonana aretina dia tsaboina: asma, allergie na tsy fahazakana, traotraoka, sciatica, tinnitus, fitohanana, mahita tory, ny fanaintainana, ny fanahiana, sns
Ny niandohan'ny reflexology plantar
Ny Reflectorology Foot dia fitaovana fitsangatsanganana tongotra iray izay mifototra amin'ny fitsipiky ny meridiana anatiny ampiasaina amin'ny fitsaboana Shinoa mandritra ny taona 5000. Ny fisehoan-javatra tranainy indrindra amin'ny foto-drafitrasa momba ny reflexology dia papyrus egyptiana fahiny izay ahitantsika lehilahy manangona ny tongotr'izy ireo. Ny fitsaboana Indiana sy ny fisehon'ny batisan'i Bouddha dia maneho ny anjara toeran'ny arofanina momba ny fitsaboana ny tsy fitoviana ara-boajanahary sy ny fomba fitsaboana azy ireo.
Ny fitsaboana Shinoa nentim-paharazana dia mihevitra fa ny vatana dia niampita ireo meridiana 12 izay mampifandray ireo taova maintany izay mikoriana ny tondra-drano izay manome antoka ny fahasalamana sy ny fandanjana. Afaka miditra an-tsehatra amin'ny fampielezana an'io hery lehibe io isika amin'ny alàlan'ny fanelanelanana amin'ny teboka marim-pototra antsoina hoe reflex izay tsy maintsy alamina, manipika, tsindriana, voapetaka mba hamerenana ny fandanjalanjan'ny taova.
Eo an-tongotrao isika dia mifandray mivantana amin'ny Renintsika.
"Aiza ny tongotrao, manomboka ny dia" Lao-Tseu, ao amin'ny Tao-Te King
Raha manao fampihetseham-pandrefesana amin'ny faritra reflex izahay, dia miasa araka ny fitsipiky ny hetsika: manao zavatra mihetsika isika.
Tao Shina, Dr. Wang-Wei, dokotera tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo talohan'i JK, dia nampiasa akupuncture sy ny reflexotherapy miaraka.
Ho an'ny Sinoa, ny tongotra dia ampahany ara-panahy ao amin'ny vatana
Ny dikan'ny teny hoe "tongotra" amin'ny teny Sinoa dia midika ara-bakiteny hoe "ampahany amin'ny vatana izay miaro ny fahasalamana".
Ho an'ny Sinoa, ny tongotra dia ampahany ara-panahy ao amin'ny vatana. Ny mikasika ny tongotra dia mikasika ny fanahin'ny olona. Izy io koa dia ampahany amin'ny vatana izay maharitra ny fifandraisana maharitra amin'ny tany, ny Tany, ny Universe. Eo amin'ny tongotra, ny vatany dia mamerina amin'ny hery enti-milaza. Misy fifandraisana eo amin'ny taova rehetra satria misy fifandraisana eo amin'ny vatana sy ny saina, ny vatana ary ny Universe. Ny rafitra sy ny taova rehetra amin'ny vatantsika dia aseho. Ohatra: ny rafi-pandrefesana, ny rafi-pandaminana, ny sakamalao, sns.
Plantar Reflexology any Andrefana
Ny ampahany tsirairay amin'ny tongotra dia mifandray, amin'ny alàlan'ny rafi-pitabatabana, miaraka amin'ny taova amin'ny vatany, arakaraka ny tampom-pahaizana marina, mba hahafahan'ny fanentanana ny tebitebin'ny tongotra avy hatrany dia mahatonga ny fanentanana ny taova .
Tany Andrefana, iray amin'ireo sanganasa voalohany momba an'io lohahevitra io dia navoaka tamin'ny 1582 tamin'ny dokotera roa eropeana, nalaza tamin'ny androny, Dr Adamus sy Atatis.
Ny reflexology ankehitriny dia avy amin'ny asan'ny dokotera Amerikanina, Dr. William Fitzgerald, izay fantatra fa rain'ny rain'ny fandinihana maoderina.
Ny rafi-pandrefesana maoderina dia novolavolain'i Eunice Ingham Stopfel izay ny boky roa "Ny zavatra azon'ireo tongotra" sy "Ny zavatra nolazain'ny tongony" dia natao ho fototry ny reflexology. Izy no nanantitrantitra ny famongorana ny faritra misy ny tongotra sy ny faritra mifanaraka amin'ny taova tsirairay.
"Ny faneren'ny tanana dia mahatonga ny loharanon'ny fiainana" Takujiro Nanikoshi
Raha manao fampihetseham-pandrefesana amin'ny faritra reflex izahay, dia miasa araka ny fitsipiky ny hetsika: manao zavatra mihetsika isika. Ny fanodinana ireo faritra ireo dia afaka manome fanazavana momba ny toetry ny vatana na ny psykolojia amin'ny faritra mihetsiketsika, ny fanaintainana na ny endriny manokana amin'ny fehikibo.
Ny tanjon'ny reflexology dia ny hamerenana ny hery sy ny fandanjana ny vatana manontolo.
Ampiasaina mba hialana tanteraka ny vatana ary hitondra fialan-tsasatra sy fialam-boly ary hampihenana ny adin-tsaina. Ny vokany sasatra nahatonga ny alalan 'mampihetsi-po io tongony, rids ny rafi-pitatitra ny fifanolanana, fampahoriana, na fihetseham-po ratsy. Amin'ny alàlan'ny fanalefahana ny vatana dia misoroka ny olana ateraky ny fahasahiranana na ny tebiteby.
Reflexology dia afaka hirotsaka an-tsehatra amin'ny fomba mahomby ho an'ny pathologies mampiseho ny fifandanjan'ny anatiny toy ny migraines, mahita tory, indray fanaintainana, vanin-taolana, mitaiza sinusitis, tonga fotoana kibo, bloating, ary ny fahatsapana reradreraka ny tongotry.
Ny reflexology fo dia iray amin'ireo teknika ho an'ny fahasalamana, ny fialam-boly, ny fampiononana ary ny fahatsarana. Fomba mahomby hiadiana amin'ny adin-tsaina izany. Manampy amin'ny fanamafisana ireo hevi-bala amin'ny vatana izany ary mamoaka ny hery miteraka.
Manampy amin'ny fanarenana ny vatana, ny vatana sy ny saina manontolo izany. Ny reflexology plantar dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny fivarotan'ny ra, ny fialana amin'ny fihenjanana, ny fampitomboana ny torimaso ...
Fitsaboana ara-pahasalamana izay azo ampiasaina amim-pilaminana. Raha tsy misy loza, dia avela hanao fihetsika mahasalama ny fihazonana ny fahasalamana.
Raha tsy mamaha ny olana rehetra izy dia fanampiana mahomby ho an'ny rehetra, lehibe ary kely.
Misy fomba hafa koa ny fandrefesana ny tongotra amin'ny chakras
Ny vatana eterika dia ahitana chakra lehibe fito (fakany, masina, chakra solar, fo, tenda, maso fahatelo, satroboninahitra). Amin'izany dia miasa isika mandritra ny fikarakarana chakra. Samy manana vato, loko, menaka ilaina ary taova mifandraika amin'izany rehetra izany. Ny chakra rehetra dia tsaboina mandritra ny fitsaboana satria raha ny iray amin'izy ireo dia misy fiantraikany amin'ny hafa ny hafa.
Ny Baiboliko reflexology sy acupressure amin'ny menaka manan-danja
24,00€ ao amin'ny staoky
5 vaovao manomboka amin'ny 24,00 €
6 avy amin'ny € 18,91
Vidio 24,00 €
tamin'ny 7 Jolay 2020 9:29 maraina
Daty namoahana 2017-04-07T00:00:01Z
Isan'ny Pages 528
Ny tsiambaratelo momba ny fahasalaman'ny Dr. Sebi (Video)
NDETE YALLA, QUEEN LAST OF WALO (Senegal)
Foundation Afrikhepri de Ny fangatahan'i Thomas Sankara ho amin'ny fahaleovan-tena: "Tsy maintsy loihintsika isika raha miverina amin'ny loharano ara-panahy sy ara-tantara mba hamerenantsika ny tanjontsika" Jul 7, 12:52
Foundation Afrikhepri de Nahoana ny firenena Afrikana no mandoa hetra any Frantsa na dia eo aza ny fahaleovantenany?: "Ny firenena "mahaleo tena" dia tsy maintsy mandoa ny fotodrafitrasa natsangan'i Frantsa tao amin'ny firenena nandritra ny fanjanahantany." Jul 7, 12:49
Foundation Afrikhepri de Tany Ejipta fahiny, ireo gadra dia nantsoina hoe "skr-cnh" izay midika hoe "babo": "Ny afrikana dia nanohitra foana ny varotra andevo. Ny ady nataon'izy ireo tamin'ny mpivarotra andevo dia nahatonga ny fandringanana rehetra ..." Jul 7, 12:43